China Razor Barbed Waya factory na suppliers |XINTELI
Razor Barbed waya bụ ụdị waya nchebe ọhụrụ. A na-eji waya mgbochi razor na-agbachitere ala ugbo, ala egwuregwu, ma ọ bụ jiri ya na Barbed Waya.A na-edozi ya n'elu ngere ahụ, dịka ọmụmaatụ, Chain Link Fence, ngere welded, na-ezere ịrịgo n'ofe.
Ihe: galvanized mpempe akwụkwọ, igwe anaghị agba nchara, elu àgwà obere carbon ígwè waya
Ọkpụrụkpụ nke agụba: 0.5± 0.05, 0.6± 0.05
Ogologo agụba: 10mm, 15mm, 22mm, 65mm
Obosara agụba: 13mm, 15mm, 21mm
agụba oghere: 26mm, 33mm, 34mm, 100mm
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji agụba ahụ eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe a na-egwupụta akụ, ụlọ ubi, ogige ndị dị n'akụkụ, ogige ndị agha, ụlọ mkpọrọ, ụlọ mkpọrọ, ụlọ gọọmenti na ebe nchekwa mba ndị ọzọ.
Uru: Razorwaya gbachiri agbachiNtupu bụ ụdị nchebe ọhụrụ nke nwere uru dị ka ọmarịcha ọdịdị, ọnụ ahịa akụ na ụba na bara uru, yana ihe owuwu dị mma.
Ọ na-arụ ọrụ nchebe na ogbunigwe, ubi na ụlọ, oke na nchekwa eze, na mgbachi ụlọ mkpọrọ.
Ngwa: Enwere ike itinye waya razor n'ụdị waya teepu ma ọ bụ eriri concertina na mgbidi ma ọ bụ fencing.
Ngwugwu: Mpempe akwụkwọ na-ekpuchi mmiri, eriri akpa kpara akpa, nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ nwere ike ịkwakọba dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Nkọwa: Ogologo na dayameta nke eriri igwe nwere ike ịmepụta dịka mkpa ndị ahịa si dị.
Nke gara aga: Igwe mkpuchi mkpuchi PVC dị elu
Osote: Nkịta Crate onu
agụba agụba waya
aguba waya maka nsu